ब्रिटिश पेट्रोलियमको गोप्य सार्वजनिक सम्बन्ध एजेन्डा
बीपीको गोप्य सार्वजनिक सम्बन्ध रणनीति
शनिबार, जून १,, २०१। आइतबार, अगस्त 19, 2012 Douglas Karr
राष्ट्रपति ओबामाले यस हप्ता रिपोर्ट गर्नुभयो कि बीपीले in करोड dollars० लाख डलरको विज्ञापनको शुरुआत गरेको छ। ह्वाइटहाउस र राष्ट्रपतिले यो सबै कदममा गरेका थिए र कम्पनीले पैसा कतै राख्नुको सट्टा वकीलहरू र विज्ञापनमा खर्च गरेकोमा आलोचना गरे।
मिडिया ब्यान्डवागनमा उफ्रिंदा, तिनीहरूले प्रिन्ट र अनलाइनमा टेलिभिजनमा हरेक व्यावसायिक, अन्तर्वार्ता र जनसंपर्क कार्यक्रमको एक हिस्सा भएको कारण बीपीको टोनी हेवर्डलाई ठट्टा गर्दैछन्। बीपी समेत एक शुरू गर्‍यो यूट्यूब च्यानल संकटको लागि निर्दिष्ट, टोनी हेडवर्ड बाहेक अरू कुनैले अभिनय गरेन।
टोनी हेवर्डले पहिले नै केहि विशाल ग्याफहरू बनाइसकेका छन् - जसमा उनले भर्खरै चाहेको कुरा उल्लेख गर्दै उसको जीवन फिर्ता पाउनुहोस् - ती शब्दहरू जुन ती 11 रिग कामदारहरूको धेरै हृदयहरूमा घोपिए जुन मौलिक आगोमा हराइयो। केही व्यक्ति टोनी हेवर्डलाई बर्खास्त गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन्, कोहीले सरकारलाई कम्पनीमा लिनको लागि आह्वान गरिरहेका छन्।
टोनी हेवर्ड किन बीपीको अनुहार हुँदैछ?
यो एक सार्वजनिक सम्बन्ध दृष्टिकोणबाट एकदम सरल छ। बीपी टोनी हेवर्डलाई ब्रान्ड र कम्पनीको फोल मान्छे हुन जुवा खेल्दैछ। अर्को वर्ष वा अधिकको लागि, हामी टोनी हेवर्डलाई धेरै हेर्न लाग्नेछौं। ऊ कही गइरहेको छैन (जबसम्म यो चालले मुख्य समाचारहरू बनाउँदैन)। बीपीले पक्कै पनि स after्कट पछि पुन: ब्रान्ड गर्दछ - तर अहिले र त्यसबखत, योसँगसँगै हरेक व्यवसायिक, हेवर्डसँगको हरेक अन्तर्वार्ता, हेवर्डसँगको हरेक हाँसोको बिट र हेवर्डसँगको हरेक विज्ञापनले शेयरधारकहरू, कम्पनी र यसको वर्तमान सीईओबीच दूरी राख्छ। ।
दिनको अन्त्यमा, टोनी हेवर्डलाई बीपी शहीद हुने सुन्दर भुक्तानी गरिनेछ। मेरा शब्दहरू चिन्ह लगाउनुहोस् कि प्लैटिनम प्यारासुट जुन अहिले विकसित भइरहेको छ कर्पोरेट हललाई लाजमर्दो बनाउँदछ। शेयरधारकहरूले खुसीसाथ यसको भुक्तानी गर्नेछन्, यद्यपि हेभार्डको शहादतले यस स crisis्कट समाप्त भएपछि केही नोक्सानीको इन्सुलेशन गर्न सक्दछ। नयाँ सीईओ आउँछ, पुरानो Badmouth, कम्पनी reposition, र फेरि जमीन बाट अरबौं चूसने शुरू।
समस्या यो छ कि त्यहाँ बीपीमा संस्कृति र व्यवस्थापनको एक लामो रेखा छ जुन यस विपत्तीमा परेको छ। साक्षीहरूले पहिले नै भनेका छन् कि तेल रेगमा बीपी व्यवस्थापनले सुरक्षाको बारेमा मात्र सचेत थिएन, उनीहरूले विस्फोट हुनु भन्दा पहिले ट्रान्ससोन (डीपवाटर होराइजनका मालिकहरू) सँग तर्क गरे। लक्ष्य भनेको ती डलरहरू बग्नको लागि जतिसक्दो चाँडो तेल निकाल्नु थियो… सुरक्षाको पर्वाह नगरी। टोनी हेवर्ड यस श्रृंखलाको शीर्षमा हुन सक्छ, तर यस संस्था भित्र अझ धेरै जिम्मेवार छन्।
यदि यो यति घृणित थिएन भने, यो एक शानदार सार्वजनिक सम्बन्ध चाल हो। बीपी नाफामा फर्किनेछ (वा अर्कै तेल कम्पनीले किनेको छ), हेवर्डले सोचेभन्दा धनाढ्य रिटायर हुनेछ, राष्ट्रपति फेरि निर्वाचित हुनेछैन, र खाडीका मानिसहरु जो यसको प्राकृतिक स्रोतहरुमा निर्भर छन् उनीहरु फेरि कहिल्यै सुधार्न सक्दैनन्। आफ्नो जीवनकाल
बीपी लोगो बीपी लोगो डिजाइन प्रतियोगिता बाट एक प्रविष्टि हो लोगो मेरो तरीका.
ग्राहक समर्थन बनाम ग्राहक समर्थन
संलग्न! व्यापार नियम र सोशल मीडिया
जुन 8, 2010 मा 5: 08 PM
मलाई यो अधिक रोचक लाग्छ कि तिनीहरूले PPC मा सबै कुञ्जी शब्दहरू किनिरहेका छन्। "तेल फैल" जस्तै सबै सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको लागि गुगल खोज्नुहोस् र तिनीहरू शीर्षमा छन्। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि मानिसहरूले किन अन्य आउटलेटहरूबाट समाचार वा विचारहरू पढेका छन् जब तिनीहरू पुग्छन् र उनीहरूको प्रयासहरू व्याख्या गर्न सक्छन्। राम्रो रणनीति जस्तो देखिन्छ।
@andersoncooper हेर्दै र म सहि थिए जस्तो देखिन्छ... Hayward ले BP बाट बाहिर निस्कँदा $18 मिलियन पाउने देखिन्छ।